Ogaden: Ceel Laga Sahminayey Batrol Gabalka Ogaden oo Gale Noqday – Rasaasa News
Feb 1, 2010 block 1, ganale, Ogaden, petronas
Nasiib daro ayey u tahay Somalida Ogadeeniya in tuhinkii laga qabay in uu shidaal dhax ceegaago jeexdin in waxba laga waayo.
Nasiib daro ayey u tahay Somalida Ogadeeniya in tuhinkii laga qabay in uu shidaal dhax ceegaago in waxba laga waayo.
ceel laga baadhayey batrool oo ay qoday shirkada Petronas oo ka mid ah ceelasha jeexdin lakabka 1aad ee basinka Ogaden ayaa noqday qalayl.
The oil exploration well drilled by Petronas in the Genale block in Ethiopia’s Ogaden basin has turned out dry.
shirkada weyn ee saliida iyo gaska ee Petronas, ayaa waxay bilowday qodo ceelkii ugu horeeyey oo laga sahminayo saliid ee Jeexdin [block 1] bishii June 2009, waxayna dhamaysay bishii September 2009. Ceelka la sahmiyey ayaa waxaa la qoday qiyaas ah dhan 3000 meter.
Khibrad layaal shirkada ah ayaa kol dhaw u hawl galay tijaabo si ay u qaxiijiyaan in ceelka ay soo galayso maax batrool iyo gas mid uun. Tijaabada oo laga qaaday iyada oo hawada ceelka ku jirta laga soo dhuuqayo iyo iyada oo la abuurayo cadaadisyo kala duwan. Hadii ay halkaas jirto saliid ama gas meelaha ku wareegsan ceelka waxay ku soo maaxan lahayd ceelka.
Ili la isku halayn karo ayaa sheegay warbixintan taas oo ay khabiirada shirkada Petronas dhaheen wax batrool ah ama gas ah oo maax ah ma anaan ka helin Genale 1.
sanadkii 2005 ayey shirkada Petronas ka heshay ogolaansho wasaarada macdanta iyo tamarta ee Itobiya saddex lakab oo ku yaal Ogaden basin oo kala ah; Genale,Kelaffo, Wardher-Ferfer. Tan iyo xiligaas shirkada Petronas waxay uruurinaysay macluumaadkii ay ku hawl galilahayd.
Petronas waxay soo kiraysatay oo ay fasax u siisay in ay hawsha sahminta qabato shirkad degan Dubai oo la yidhaahdo Weather Ford. Weather Ford waxay qandaraas ku qaadatay in ay soo uuruuriso macluumaad iyo in ay samayso sahmin qidida ceelasha.
Petronas waxay kol hore qoday labo ceel oo ay ka sahmisay Gambella Block, qaybta galbeed ee Itobiya. Labada Ceelba sidoo kale waxay ahaayeen kuwo qalalan.
Xiligan waxay duleelin sahmin ah ku haysaa hal ceel oo kaliya qiime ka badan 20 million USD ah.